‘चाबी ठोकेर गाउँ जाँदै हुनुहुन्छ ? फेसबुकमा नलेखौं !’ - Aathikbazarnews.com ‘चाबी ठोकेर गाउँ जाँदै हुनुहुन्छ ? फेसबुकमा नलेखौं !’ -
घरैमा तास खेल्दा पनि लेनदेन गरेको भेटिए कारवाही हुने
दशैंका बेला शहरमा रहेको डेरा वा घरमा तालाचाबी ठोकेर गाउँतिर जाने चलन अधीक छ । यस्तो बेलामा रित्तो घरमा चोर छिर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता घरबेटी र प्रहरी दुबैलाई हुन्छ ।
दशैंजस्तो चाडबाडको बेला नेपाल प्रहरीले कसरी सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाइरहेको छ त ? प्रहरी प्रवक्ता पोखरेलसँग गरेको कुराकानी–
हरेक चाडपर्वको समयमा के कस्ता घटना हुन्छन् भन्ने विषयलाई नेपाल प्रहरीले विगतका प्रवृत्तिका आधारमा मूल्यांकन गरिसकेको छ । हामीले लगभग पाँच आर्थिक वर्षको अपराधको प्रवृत्ति र कारणको विश्लेषण गरेर अपराधलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले नयाँ कार्ययोजना लागू गरेर अघि बढेका छौं । यो वर्षको दशैंमा कुनै नेपाली नागरिकको घरमा आँशु चुहुनु नपरोस्, अप्रिय घटना नहोस् भन्ने हिसाबले योजना बनेको छ ।
दशैंमा घरपरिवार बसेर रमाइलोका लागि तास खेल्ने चलन छ । तपाईंहरुको निगरानी कहाँ–कहाँ हुन्छ ?
आर्थिक लेनदेनको हिसाबले खेलिने जुवातासलाई कानूनले निषेध गरेको छ । त्यसैले यसमा बरामद भएको रकम हेर्नेभन्दा पनि निषेधित कार्य कसैबाट गरिएको छ भने त्यसमा कानून आकर्षित हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यस्ता विषय नियन्त्रण गर्ने, रोक्ने र कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको हो ।
आर्थिक र हारजितको कुरा जोडियो भने कानूनको दायरामा आउँछ ।
कानूनद्वारा बर्जित विषय चाडपर्वका नाममा छुट पाउने अपेक्षा कसैले गर्नुहुँदैन । दशैं भनेर मादक पदार्थ सेवन गर्ने र त्यसले झैंझगडा वा अन्य कुनै पनि किसिमको अपराध भएको छ भने कसैले छुट पाउँदैन ।
चाडवाडको समयमा आम नागरिक उत्सवमा रमाउँछन् । तर, सबै उत्सवमा रमाइरहेको मौका छोपेर अपराध गर्नेहरु सल्बलाउने गरेका छन् । चोरी, लुटपाट जस्ता घटना हुने गरेको देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय कतिपय घटनामा प्रहरी आफैं पनि विवादमा मुछिँदै आएको छ । अहिले दशैंको समयमा सबैभन्दा सुरक्षा दिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ । यो अवस्थामा नेपाल प्रहरी आम नागरिकको अपेक्षा अनुरुपको सुरक्षा दिन कत्तिको सक्षम छ ?
अहिले त झनै वर्तमान सरकार प्रमुखबाट मन्त्री तहदेखि राज्य संयन्त्रका हरेक प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको नयाँ अभ्यास भएको छ । प्रहरीसँग पनि यो किसिमको सम्झौता भएको छ र त्यसमा उल्लेख भएका विषयलाई निश्चित अवधिमा प्राप्ति गर्नका लागि हामी योजनावद्ध ढंगले अघि बढेका छौं । त्यसैले प्रहरीलाई कुनै पनि विषयमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।अनलाइनखबर
ग्लोबल आइएमई बैंकले कोरियाबाट फर्केका नेपालीहरुलाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने